प्रदेश ५ मा ३४.८ प्रतिशत रोपाइँ अब किसानले श्रमको वास्तविक मूल्य पाउँछन् : मन्त्री पौडेल
विकाश पराजुली बुटवल, १५ असार
मानो रोपेर मुरी उब्जाउने असारमा हालसम्म प्रदेश-५ मा ३४.८ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । यस वर्ष समयमै मनसुन भित्रिएकाले प्रदेशमा ३४.८ प्रतिशत रोपाइँ भएको प्रदेश कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ ।
गत वर्ष १५ असार सम्म जम्मा २९ प्रतिशतमात्र रोपाइँ भएको थियो । यो वर्ष १५ असार सम्म तराईका जिल्ला ५० प्रतिशत धान रोपाइँ भएको र पहाडका जिल्लामा १० देखि १५ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको कृषि निर्देशनालयका निर्देशक यामनारायण देवकोटाले जानाकारी दिए ।
तराईमा वैशाख अन्तिम साता ब्याड राखी असारको पहिलो हप्ताबाटै धान रोपाइँ गर्ने गरिन्छ । पहाडमा भने तराईको तुलनामा मध्य असारदेखि मात्र धान रोप्ने गरिन्छ । यस वर्ष मनसुन छिटो भित्रिए पनि पहाडमा विउ तयार नहुँदा तराईको तुलनामा धान रोपाइँ कम भएको निर्देशक देवकोटाको भनाइ छ ।
त्योबाहेक यसवर्ष कोरोना महामारीका कारण अरू पेशा व्यवसाय बन्द भएको मौका छोपी किसानहरू खेतीपातीमा लाग्दा रोपाइँको प्रतिशत गत बर्षको तुलनामा बढेको हुन सक्ने निर्देशनालयले जनाएको छ ।
देवकोटाका अनुसार प्रदेश ५ को कपिलवस्तुमा सबैभन्दा ५५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । त्यस्तै, रूपन्देही र पाल्पामा ५४ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ भने बाँकेमा ५२, प्यूठानमा ४७, बर्दियामा ४६, नवलपरासीमा ४५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ ।
सबैभन्दा कम गुल्मीमा जम्मा ३.५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । मध्य असारसम्म रूकुममा १०, रोल्पामा ९.५ र अर्घाखाँचीमा ८.८ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।
प्रदेश ५ मा गत वर्ष ३ लाख ३० हजार ८ सय ८१ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएको थियो भने यो वर्ष थप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अब किसानले श्रमको वास्तविक मूल्य पाउँछन् : मन्त्री पौडेल
प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले कृषिमा किसानले गरेको योगदानको उचित मूल्याङ्कन हुने बताएकी छन् । असार १५ को धान दिवसको अवसरमा तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित कान्छी बजारमा आयोजित १ कार्यक्रममा बोल्दै सरकारले किसानमुखी कार्यक्रमहरू ल्याएको जानकारी दिँदै अब किसानले आफ्नो श्रमको वास्तविक मूल्य पाउने दाबी गरेकी हुन् ।
प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै कृषिको बजार प्रणालीमा बिचौलीयाको हालीमुहाली रोक्न सहकारीमार्फत् बजारीकारणलाई प्रोत्साहन गरिएको बताइन् । त्यस्तै, कार्यक्रममा कृषि विज्ञ डा. दामोदर भुषालले कृषीमा व्यापक परिवर्तन हुन नसकेको बताउँदै यान्त्रीकरणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । उनले त्यसका लागि किसान र सरकारबीच निरन्तर संवादको खाँचो रहेको बताए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीले कृषिमा यान्त्रीकरणका लागि उपकरण व्यवस्थापनका लागि प्रदेशमा केन्द्रहरू निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले किसानले चाहेको खण्डमा उपकरण खरिद गर्न तथा भाडामा दिन मिल्ने गरि कस्टम हायरिङ सेन्टरको स्थापना गर्न लागिएको बताएका हुन् ।
असार १५ को अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा यान्त्रीकरणमा सहयोग गरेवापत २ स्थानीय किसानलाई सम्मान गरिएको थियो । समसेर राना र नेत्रबहादुर पुनलाई थोरै ज्यालामा समेत कृषिको यान्त्रीकरणमा उत्कृष्ट योगदान पुर्‍याएको भन्दै मन्त्रालयले प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरेको हो ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सोमबार १७ औं राष्ट्रिय धान दिवस एवं रोपाइँ महोत्सव मनाएको छ । वडा नं. ६ स्थित नगरपालिकाको नवनिर्मित भवन परिसरको खेतमा धान दिवस मनाइएको हो । दिवसको अवसरमा नगरपालिकाको आफ्नै झण्डै ४ विगाहा खेतमा धान रोपाइँ गरिएको संयोजक एवं वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष सुखदेव न्यौपानेले जानकारी दिए ।
रोपाइँ महोत्सवमा नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरे, उप–प्रमुख जागेश्वरी चौधरीलगायतका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी, अगुवा किसान लगायतको सहभागिता थियो । रोपाइँको लागि वडागत रुपमा प्लट विभाजन गरिएकोमा जनप्रतिनिधि बिहानै खेतमा जुटेर उत्साहित रूपमा धान रोपाइँमा सहभागी भएका थिए । ‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउने’ महिना मानिने असारको मध्यदिन सोमबार तिलोत्तमाका जनप्रतिनिधि धान रोपाइँमा जुटेका हुन् ।
नगरपालिकाले धानको सम्पूर्ण व्यवस्थापन आफैँ गर्नेगरी रोपाइँ गरेको हो । यसअघि सो खेतमा मकैं तथा गहुँ खेती गरिएको थियो । कार्यक्रममा नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले तिलोत्तमा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै कृषिमा व्यावसायिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
निर्वाहमुखी कृषिले किसानको जीवनस्तर उठ्न नसक्ने चर्चा गर्दै उनले तिलोत्तमाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए ।
त्यस्तै, तिलोत्तमामा कयौं वर्षदेखि बाँझो रहेका जमिनमा पनि यस वर्ष धान रोपाइँ भएको छ । नगरपालिकाले खेतीयोग्य बाँझो जमिनमा जग्गाधनी आफैँले खेती नगरे वा नगराए सधियाँर वा अन्य व्यक्तिले खेती गर्न सक्ने निर्णय गरेपछि बाँझो रहने जग्गामा रोपाइँ भएको हो ।
कुल खेतीयोग्य जमिन ८ हजार ४४९ हेक्टरमध्ये ८४५ हेक्टर जग्गा बाँझो रहने गरेकोमा अहिले त्यसको झण्डै ६० प्रतिशतमा रोपाइँ भएको कृषि शाखाको तथ्यांक छ । यस वर्ष जेठ दोस्रो साताबाटै तिलोत्तमामा रोपाइँ सुरु भएकोमा असार दोस्रो सातासम्म झण्डै ९० प्रतिशत खेतमा रोपाइँ सकिएको छ ।
लकडाउनको कारण नगरबासी फुर्सदिला रहँदा धान रोपाइँ विगतका वर्षमा भन्दा यो वर्ष छिटो सकिने कृषि शाखा प्रमुख दोमलाल भुसालले जानकारी दिए । नगरपालिकाले कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावसँग जुध्न खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने निर्णय गरेको हो ।
तीव्र शहरीकरण भइरहेको तिलोत्तमामा घडेरीको रूपमा विकास भएका कतिपय जग्गा बाँझा छन् । मूलतः यस्तै जग्गालाई लक्षित गरी नगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै आफ्नो घर वरिपरि भएका खाली जग्गामा मौसमी खेती गर्न तिलोत्तमाबासीलाई बाटो खुलेको हो । यो वर्ष धान, तरकारीलगायत कृषि उत्पादन बढ्ने नगरपालिकाको विश्वास छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १५, २०७७, १९:३२:००
सलहको नेपाल प्रवेशसँगै रोपाइँ सुरु गरेका किसान चिन्तित